संचारकर्मी सरोज अधिकारीद्वारा तनहुँका बिपन्न परिवारलाई सहयोग हस्तान्तरण – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. संचारकर्मी सरोज अधिकारीद्वारा तनहुँका बिपन्न परिवारलाई सहयोग हस्तान्तरण – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
संचारकर्मी सरोज अधिकारीद्वारा तनहुँका बिपन्न परिवारलाई सहयोग हस्तान्तरण
पोखराका संचारकर्मी सरोज अधिकारीले तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकीमा बस्ने एक असहाय परिवारलाई राहत तथा न्यानो कपडा सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन्।
पोखरामा लामो समय देखि संचार क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका अधिकारीले हालसम्म थुप्रै अभियानहरु संचालन गरिसकेका छन। यस्तै संचारकर्मी सरोज अधिकारीले यस वर्ष पनि जाडो सुरु भएसंगै सहयोगका अभियान थालनी गरेका हुन्। “सेवा नै ठुलो धर्म हो” भन्ने उदेश्यका साथ् सुरु भएको अभियानमा उनले सबैलाई हातेमालो गर्न पनि अपिल गरेका छन।
कापीमा लेखेर कुराकानी गर्दै तिलक र उनकी जेठी श्रीमती
तनहुँ जिल्लाको शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा न ५ मा सडकको छेउमा एक परिवार सानो झुप्रो बनाएर बस्दै आएका छन। तिलक बहादुर सुनार र २ श्रीमती गरी कुल ३ जनाको परिवार संगै बस्दै आएका छन। धेरै वर्ष देखि शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको ओरि परी बस्दै आएका उनीहरुले सबै कुरा देख्छन इसाराहरु बुज्छन तर राम्रो संग बोल्न भने ३ जनाले नै सक्दैनन। सानोमा ४ कक्षा पढेका तिलकले आफु बोल्न नसकेपनि उनले अरुले गरेको इसारा बुज्छन र कापीमा उत्तर दिदै लेख्न सक्छन।
तिलककी कान्छी श्रीमती र उनीहरु बस्दै आएको घर
मादल र कपडा सहयोग पाएपछि कान्छी बुढीलाई नया कपडा लगाईदिदै तिलक
कापीमा लेख्दै तिलकले स्थानीय बासिन्दा र बाटोमा हिड्ने यात्रुले दिएको सहयोगमा आफुहरुले बिहान बेलुकाको छाक टार्दै आएको बताउछन । तिलकले चित्र पनि राम्रो बनाउछन। यस्तै उनले पहिला मादल बजाउने गर्थे र उनका २ श्रीमतीलाई नाच्न लगाउने गर्दै आएका थिए। पछिल्लो समय उनीहरुको मादल पनि चोरी भएको छ भने उनीहरु सडकको छेउमा सानो झुप्रो बनाएर बसेका छन। कवाडीको सामानले टायर बास कार्टुन लगाएतका सामान हरुले बनाएको सानो झुप्रोमा उनीहरु ३ जना बस्ने गर्छन।
तिलकले प्रत्यक्ष हेरेर बनाएका संचारकर्मी सरोज अधिकारीको चित्र
संचारकर्मी अधिकारीका अनुसार केहि दिन अगाडी कार्यक्रम छायांकन गरेर फर्कने क्रममा उनीहरुले छाप्रो कसको होला भनेर सोधपुछ गरेर एउटा कार्याक्रम छायांकन गरेका थिए। त्यो दिन तिलक आफ्नो परिवार लिएर कवाडी बटुल्न गैसकेका रहेछन ? उनीहरुसंग भेट हुन् नसकेपछि अधिकारीको मनमा धेरै प्रश्नहरु आउँन थाल्छन। सरकारले सडकमा केहि दिन अगाडि अब कोहि पनि नागरीक मागेर खान नपर्ने र सडकमा बस्न नपर्ने घोसणा गरेको थियो। तर तिलकका परिवारको लागि सरकार कता रहेछ र हजुर ?
तिलक र उनका २ श्रीमती
तिलक सुनारका अनुसार पृथिवी राजमार्गको आडैमा सानो झुप्रो बनाएर बसेका उनीहरुमाथि कसैको नजर पुग्न सकेन। दिनमा हजारौ गाडीहरु हिड्ने यो सडकमा सयौको संख्यामा बरिष्ट मानिने माननीय सम्माननीय ज्यु हरुको गाडी पनि आवात जावत हुन्छ तर कसैले पनि यो के रहेछ भनेर सहयोहगको हातहरु फैलाएको पाईएन।
तिलक सुनारको यो अवस्था देखेपछि अधिकारीले उनीहरुलाई केहि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उदेश्यका साथ् आज सहयोग हस्तान्तरण गरेका छन । संचारकर्मी अधिकारी लगाएतको समुहले आज उनीहरुलाई पहिलो चरणमा उनीहरुको घरको अवस्था हेरेर अति आवस्यक सामाग्री वितरण गरेका छन। तिलकले अघिल्लो चोटी भने अनुसार आफुहरुले बजाउदै नाच्दै बिहान बेलुका छाक टार्दै आएका थिए त्यो पनि चोरी भएपछी उनि चिन्तित भएका थिए।
बोल्न नसकेपनि लेखेर सम्बाद तिलक
संचारकर्मीको समुहले उनीहरुलाई एउटा मादल पनि किनिदिएका छन। यो जाडोमा लगाउने न्यानो कपडा ३ जनालाई ज्याकेट ,टोपी ,मोजा ,टाउजर लगाएतका कपडा सहयोग गरेका छन। साथै उनीहरुले खाद्यान्न सामाग्री ३० केजीको चामलको बोरा ,तेल ,नुन ,बेसार, चिनी च्यापत्ति ,बिस्कुट दाल लगाएतका बिभिन्न सामाग्री पनि सहयोग गरेका छन।
सामान हस्तान्तरण पछि खुसि भएका तिलक र उनका २ श्रीमतीले नाच्दै बजाउदै संचारकर्मीको समुहलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए।
नया कपडा पाउदाको खुशी
सहयोग हस्तान्तरण पछि समय नेपालसंग कुरागर्दै संचारकर्मी अधिकारीले सबै संचारकर्मीहरुलाई पनि हाम्रो सानो सानो प्रयास दुखि गरिब असहायका लागि ठुलो हुने भएकाले सबै एकजुट भएर समाजसेवामा लाग्नुपर्ने बताएका थिए।
हामी अनुरोध गर्न चाहान्छौ , सिङ्गदरबारको अधिकार घर घरमा भन्ने सरकारको नारा मात्र एक नारामा सिमित नरहोस् र तिलक लगाएतका परिवारलाई सरकारले बस्ने एउटा गतिलो बासको व्यवस्था गरिदिओस। सकिन्छ र सम्भव हुन्छ भने उनीहरुलाई उद्धार गरी कुनै संस्थाको जिम्मा लगाएर उनीहरुको जीवन परिवर्तनमा सरकारको ध्यान पुग्नेछ। उनीहरुले कवाडी बटुलेर ल्याएको हरेक कुरामा केहि रकम कर सरकारको नाममा जान्छ भने सरकारले नागरिकको ख्याल गर्नुपर्दैन र हजुर ?
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको December 9, 2020 December 9, 2020 312 Viewed